Fampidirana ny vera voaroaka miaraka amin'ny jamba tsy mitambatra
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-29
Vera voaravaka miaraka amin'ny jamba tsy mitambatra, antsoina koa hoe vera loaka misy hidina, izay vokatra manaloka ny masoandro. Amin'ny ankapobeny, ny jamba ao anaty vera banga dia fehezin'ny hery anaty mahery vaika. famaritana ny vokatra Amin'ny ankapobeny, tady manual na meth mekanika ...
Ahoana ny fomba hanavahana haingana ny kalitaon'ny vera insulate
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-27
Ny varavarana sy ny varavarankely vita amin'ny vera dia mihaona tsikelikely ho an'ny varavarana sy ny varavarankely vokatra amin'ny haingon-trano noho ny fitehirizana ny hafanana sy ny vokatra azo avy amin'ny insulation. Fa raha mbola mandehandeha eny amin'ny tsenan'ny fitaovam-panorenana ianao dia ho hitan'ny olona fa be ny ...
Fanamafisana ny habaka fitaratra mafana fitaratra izay tsy azo odian-tsy hita
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-21
Raha ny fitakiana isan-karazany dia azo atao vera isan-karazany ny vera mitaingina. Ohatra, vera mitaingina vita amin'ny vera laminated, izay misy vokany insulate tsara kokoa. Ny firafitra poakaty misy ravina vera telo sy lavaka roa dia mitsitsy angovo kokoa. Fa inona no mamaritra ...
Tena fantatrao ve ireo lafin-javatra dimy misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny vera insulate?
Hatramin'ny fampiasana fitaratra insulate, ny famokarana azy dia niaina ny fizotran'ny vera roa, fitaratra roa tsotra, tombo-kase fantsona tokana, tombo-kase fantsona roa ary fitaratra mitaingina karazana fantsom-bovoka sns. Taorian'ny nearl ...
Famoronana ilaina amin'ny vera fitaratra
1. Groove karazana alim-baravarankely adhesive butyl famehezana ho an'ny famehezana voalohany; Ny tombo-kase faharoa dia ny lakaoly polysulfide sy ny lakaoly silika. Adhesive Polysulfide dia mety amin'ny rindrina na rindrina ambainy fitaratra vita amin'ny vera; Ny lakaoly silika dia ...
Fahalalana fototra momba ny vera fitaratra
Miaraka amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fanodinana vera eto an-toerana sy ny fanamafisana ny fahalalan'ny olona ny fahombiazan'ny vera fitaratra, ny fatra fampiharana ny vera fitaratra dia tsy mitsaha-mivelatra. Ho fanampin'ny fampiharana malalaka amin'ny vera Gordai ...